Global Voices teny Malagasy » Fihibohana ho an’ny olom-pirenena, fialantsasatra eny amoron-dranomasina ho an’ny mpizahatany: mampiseho ny tsy fifandajana amin’ny fepetran’ny COVID ny dokambarotra vaovao any Torkia · Global Voices teny Malagasy » Print
Fihibohana ho an'ny olom-pirenena, fialantsasatra eny amoron-dranomasina ho an'ny mpizahatany: mampiseho ny tsy fifandajana amin'ny fepetran'ny COVID ny dokambarotra vaovao any Torkia
Voadika ny 24 Mey 2021 4:41 GMT 1	 · Mpanoratra Arzu Geybullayeva Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Pikantsary avy amin'ilay lahatsary  dokambarotra navoakan'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Fizahantany any Torkia tamin'ny volana Mey 2021.
Niteraka fahatezerana tao amin'ny tambajotra sosialy ny lahatsary  vaovao fampiroboroboana navoakan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fizahantany Tiorka  mandrisika ny mpizahatany iraisam-pirenena hitsidika ny firenena, raha mbola ao anatin'ny fepetran'ny fihibohana ny mponina ao an-toerana. Tsy ampy 24 ora taorian'ireo fanehoan-kevitra ireo dia nesorina tao amin'ny tranokalan'ny governemanta ilay doka.
Nivoaka tamin'ny 13 Mey, mampiseho hotely sy ny mpiasan'ny orinasa hafa miarahaba ireo mpizahatany manao arotava ilay horonantsary izay milaza hoe “Ankafizo! Vita vakisiny aho!” miaraka amin'ny feo any ambadika milaza hoe: “trano fandraisam-bahiny manaraka ny fepetra ara-pahasalamana sy mpiasa vita vakisiny. Roa sosona ny fiarovana ho an'ny fizahantany hoy izahay. Fiadanan-tsaina hoy ny vahininay. Tongava mankafy ny toerana azo antoka, Turkish Riviera . ”
Nametraka lalàna vaovao mifehy ny fihibohana i Torkia tamin'ny 29 Aprily mba hisorohana ny andiany vaovao amin'ny COVID-19 , saingy tsy tafiditra ao anatin'izany ireo mpanao fialantsasatra iraisam-pirenena.
Mandoa onitra henjana  mitentina 3.180 lira (380 dolara amerikana) sy onitra fanampiny mitentina 900 lira (110 dolara amerikana) ny olom-pirenena tratra manitsakitsaka ny fepetra raha tratra tsy manao arovavaorona izy ireo. Ankoatra izany, noraran'ny Ministeran'ny Atitany ny varotra antsinjarany rehetra amin'ny vokatra tsy ilaina, toy ny taratasy, ny vokatra fanatsaran-tarehy, ny tanimanga, ny zava-pisotro misy alikaola. Hifarana amin'ny 17 Mey ny fepetra.
Tao anatin'ny ezaka hampisondrotana ny indostrian'ny fizahantany  tratran'ny krizy, izay nahitana fatiantoka  € 8,3 miliara (10,1 miliara dolara amerikana) tamin'ny taon-dasa, ary nihena hatrany amin'ny 40 isan-jato ny karama ankapobeny raha ampitahaina tamin'ny taona 2019 dia ny fanaovam-bakisiny ny mpiasan'ny fizahantany rehetra no nataon'i Torkia laharam-pahamehana ka natao tsinontsinona ny sehatra hafa. “Nataonay vakisiny ny mpiasan'ny fizahantany rehetra, ny mpiasan'ny hotely sy ny trano fisakafoana, ny mpamily, ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina ary izay rehetra mifanerasera amin'ny mpizahatany, ao anatin'izany ireo mpitari-dia,” hoy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Mevlüt Çavuşoğlu nandritra ny fitsidihany tany Berlin  tamin'ny herinandro lasa.
Vetivety dia niteraka tsikera  tao amin'ny tambajotra sosialy Tiorka ilay doka. Niantso ny horonantsary ho “manala baraka” ireo mpitarika ny antoko mpanohitra  samihafa. Nitaky ny fialan'ny minisitry ny fizahantany ankehitriny tao amin'ny sioka  ny praiminisitra teo aloha, Ahmet Davutoğlu.
Nalaza tao amin'ny Twitter nanomboka teo ny #TurizmBakanıİstifa (midika hoe “miala, ny minisitry ny fizahantany”).
Toy ny andevo natolotra ho an'ny mpizahatany izahay!
Manao arovavaorona misy soratra “Vita vakisiny aho” no hahitan'ny mpizahatany ny Tiorka. Asio kavina izahay, poizino ireo mahery setra, ary raha misy mihetsika, dia omeo fialofana izahay, angamba mety hisy handray anay.
Any Torkia, mitondra marika eny an-tsofiny ny alika mpirenireny izay vita vakisinin'ny haromotana.
Tsy marina izany. Mety tsy ataonareo vakisiny ny olona, ​​fa farafaharatsiny mba aza alaina baraka izy ireo!
Nizara tantara vazivazy  iray ho valin'ny horonantsary ny Zaytung, gazetiboky mpanesoeso Tiorka, nanome toky ny mpizahatany ho tonga fa ny famosirana ireo mpandroso sakafo lehilahy sy ireo mpiasan'ny morondranomasina rehetra, izay manao T-shirt misy soratra hoe: “Ankafizo! Vositra aho! ” ny fepetra manaraka ho raisin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fizahantany.
Na dia maro aza ireo Tiorka no namaly ilay horonantsary dokambarotra tamin'ny hatsikana maherihery , dia mbola nafana ny hasorenana tamin'ny antokon'ny fitondrana Rariny sy Fampandrosoana nandritra ny valan'aretina. Toa ny fampahatsiahivana ny tsy fahaizan'ny fitondrana mitantana ny valan'aretina tato anatin'ny 14 volana ny zavatra tena tian'ny olom-pirenena atao amin'izao fotoana izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/24/152685/
 Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fizahantany Tiorka: https://www.ktb.gov.tr/?_dil=2
 Turkish Riviera: https://web.archive.org/web/20210513195940/https://twitter.com/hashtag/TurkishRiviera?src=hash
 andiany vaovao amin'ny COVID-19: https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-reports-over-60000-daily-coronavirus-cases/news
 onitra henjana: https://www.dailysabah.com/turkey/expat-corner/turkeys-17-day-total-lockdown-everything-you-need-to-know
 noraran'ny : https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-market-tedbirleri-genelgesi-gonderildi
 indostrian'ny fizahantany: https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/turkeys-tourism-sector-fears-another-disastrous-year
 hoy : https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-tan%C4%B1t%C4%B1m-videosu-tart%C4%B1%C5%9Fma-yaratt%C4%B1/a-57525128
 fitsidihany tany Berlin: https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-almanya-yi-ziyareti-6-5-21.en.mfa
 niteraka tsikera: https://twitter.com/06JAnk/status/1392968697808097284/photo/2
 mpitarika : https://twitter.com/alibabacan/status/1392941836948451335
 antoko mpanohitra: https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1392950084934021131
 May 13, 2021: https://twitter.com/tugbatekerek/status/1392921806420467725?ref_src=twsrc%5Etfw
 May 13, 2021: https://twitter.com/batuhancolak33/status/1392917443438383107?ref_src=twsrc%5Etfw
 May 13, 2021: https://twitter.com/erenerdemnet/status/1392918292734619651?ref_src=twsrc%5Etfw
 tantara vazivazy: http://zaytung.com/haberdetay.asp?newsid=391913
 hatsikana maherihery: http://cbldf.org/2015/01/humor-as-a-weapon-against-fear-in-turkey/